Train Travel UK Archives | စာမျက်နှာ2၏4| တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားယူကေ
5 ဥရောပမှာတော့ Ice Cream စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ကြသောသူတို့ကကမ်းလှမ်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသိစွန့်စားမှုသိ. ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာမျိုးစုံနည်းလမ်းသင်၏အသက်တာကြွယ်ဝစေနိုင်ပါတယ်. ဘာသာစကားများထံမှ, စိတ်ကူးမြင်ကွင်းများ, နှင့်သမိုင်းသင်အိမ်ပြန်မတှေ့နိုငျသောစိတ်ကူးအစားအစာ. သူတို့အား…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အတော်လေးငါးဖမ်းတူသောဘာမျှမယ့်နေရာအသစ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရှိတယ်. မည်သည့် angler များအတွက်, အယောင်ဆောင်ရှိမရှိသို့မဟုတ်အတှေ့အကွုံအပြည့်အဝ, ငါးဖမ်းသူတို့ကိုအနားယူကူညီပေးသည်တဲ့အဖိုးတန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. အဘယ်အရာကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး pastime ပေါင်းစပ်ပြီးထက်ထိုသူတို့အဘို့ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ကံကောင်းစွာ…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပနိုင်ငံများမေတ္တာကိုဂုဏ်ပြုသောသူတို့၏အမျိုးသားအားလပ်ရက်—အထူးသဖြင့်သူတို့၏မြင်သောသူအများကြီးခရီး. သင်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်မြင်အဲဒီထဲကနိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များ? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်အပွဲတော်! သင်တို့သည်လည်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ခေတ်သစ်အနုပညာချစ်သူများဥရောပတွင်သွားရောက်နေရာအများအပြားရှိ. ရှေးခယျြမှု၏ထိုကဲ့သို့သောစည်းစိမ်နှင့်, ဖြစ်ကောင်းအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအနုပညာတူးဖော်ရေးများအတွက်ဥရောပရဲ့ချုပ်ဟော့စပေါ့သွားရောက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်, ပတ်လည်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်?…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပခရီးသွားဧည့်သန်းပေါင်းများစွာသောဆွဲဆောင်ကြောင်းယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပေါများ. ကြည့်ဖို့မြင်ကွင်းများအမျိုးမျိုးရှိတယ် - ဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတအနေဖြင့်ဟောငျးကုန်းတွင်းပိုင်း၏သဘာဝအအံ့ဘွယ်သောအမှုမှ. ကနေရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုအတူ, it can be difficult for…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးထွက်ဖြစ်စေမယ့်အိပ်မက်ဆိုးသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့သူငယ်များ '' တောင်းဆိုနေတာသဘာဝနှင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ကိုများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. သို့သျောလညျး, there are ways for you to make traveling with children…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ...